Porn wuxuu kiciyaa isbedelka cimilada - The Reward Foundation
Blog Porn wuxuu horseedaa isbedelka cimilada
adminaccount888 30th July 2019 News Latest
Porn wuxuu horseedaa isbedelka cimilada. Daawooyinka adduunka oo dhan laga daawado ee qaawan waxay u baahan tahay 0.2% dhammaan qiiqa gaaska guryaha. Taasi waxaa laga yaabaa inaysan u ekaan sidii wax aad u badan, laakiin tani waxay la mid tahay 80 milyan oo tan oo kaarboon dioxide ah sannad kasta, ama inta ugu badan ee ay bixiyeen dhammaan qoysaska ku nool Faransiiska.
Bishii Luulyo 2019 koox uu hogaaminayo Maxime Efoui-Hess at Mashruuca Shift Magaalada Paris ayaa lagu daabacay warbixintii ugu horreysay ee ugu weyneyd ee fiirineysa isticmaalka tamarta ee fiidiyowga tooska ah. Waxay sameeyeen daraasad faahfaahsan oo ku saabsan korantada la dhammeeyay markay gaarsiinta macaamiisha u soo daawadaan fiidiyowyada qaawan.
Fiidiyowgaan wuxuu ku soo koobayaa Jawaabta Mashruuca Shift… Fiidiyowgaan, oo isagu laftiisa leh gaasaska dhirta lagu koriyo (celcelis ahaan in ka yar wax ka yar 10 garaam oo ah CO2 aragtidiiba), ayaa loogu talagalay dadweynaha guud. Waxay ujeedadeedu tahay in la muujiyo saameynta deegaanka ee tikniyoolajiyada dijitaalka ah, halka aan la arki karinna maalin kasta. Fiidiyowgu wuxuu kaloo muujinayaa cawaaqibka isticmaalka dijitaalka ah ee ku saabsan isbedelka cimilada iyo yaraanta kheyraadka.
Porn wuxuu kiciyaa isbedelka cimilada! Hagaag, ma qabtaa? Marka hore, aynu eegno mashruuca Shift aragtida weyn ee sawirka.
Mashruuca loo yaqaan 'Shift project' wuxuu muujiyey in dad aad u badan ay daawanayaan fiidiyowyo qaawan oo runtii saameyn ku leh dhulkeenna, taasoo gacan ka geysaneysa isbedelka cimilada.
Falanqayn cusub mid ka mid ah gudi hoosaadyada dawlada ee ku saabsan isbedelka Cimilada ayaa arkaya halista heerarka hadda diirimaadka adduunka wuxuu arki karaa heerarka bada oo kor u kacaya ilaa mitirka 2 sanadka sanadka 2100. Tani waxay barakicin kartaa ilaa 187 milyan oo dad ah isla markaana daadad badan oo ku teedsan xeebaha.
Porn wuxuu horseedaa isbedelka cimilada. Tabarucaadku waa dhab. Waa qatar inayna qofna garowsanayn inaan qaadnay.
Hadaad rabto inaad waxbadan ka aqriso kiiska daraasada 'Shift Project' daraasad, aragkeena bogga buuxa.